Toerana fizahan-tany momba ny fizahan-tany ara-pitsaboana miaraka amina vaksinin'ny COVID-19
Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Toerana fizahan-tany momba ny fizahan-tany ara-pitsaboana miaraka amina vaksinin'ny COVID-19
Tsy dia ratsy loatra ny fiandrasana telo herinandro eo anelanelan'ny vaksinin'ny vaksiny voalohany sy faharoa teny amoron-dranomasina Seychelles fotsy.
Orinasa lehibe manolotra serasera eran'izao tontolo izao ny fizahantany ara-pahasalamana. Manomboka amin'ny implant nify ka hatramin'ny famindrana fo dia manarona ny zava-drehetra sy amin'ny toerana maro ny fizahan-tany ara-pitsaboana.
Ny vaksinin'ny COVID-19 dia eo am-pitakiana mafy eran'izao tontolo izao, saingy misy firenena mandroso kokoa noho ny hafa na vitsy an'isa.
Ny fizahan-tany COVID-19 dia mety ho fotoana manaraka ahafahan'ny betsaka mandray vaksiny haingana kokoa.
Orinasa lehibe ao Torkia ny famindrana volo sy ny implant nify. Ny tifitra Coronavirus dia manana ny akora ilaina rehetra mba ho tonga tombony amin'ny fizahan-tany ary efa mivoaka ny mpizahatany
Misokatra ny Dubai Mall. Fitsangatsanganana an-tsokosoko mandritra ny telo herinandro sy fitsangantsanganana amoron-dranomasina mankany amin'ny Emira Arabo Mitambatra sy tobim-pahasalamana kilasy voalohany ary hotely lafo vidy tsara indrindra eran'izao tontolo izao vonona hanompo anao. Tena marina izany raha toa ka misy ny tifitra COVID-19 anao ity fialan-tsasatra ity.
Ny fiandrasana ny telo herinandro eo anelanelan'ny vaksininao COVID-19 voalohany sy faharoa voatifitra tao amin'ny trano fisakafoanana amoron-dranomasina tamina morontsiraka fotsy Indiana Fasika any Seychelles dia toa tsy dia ratsy loatra amin'ny maro.
Ny Maty hita any Israel dia matetika no hita fa toerana mahasalama indrindra eto an-tany. Israel dia manao asa lehibe amin'ny fanaovana vaksiny ny olom-pireneny, ary mety ho avy tsy ho ela ny fizahan-tany amin'ny fialantsasatra vaksinina.
Araka ny vaovao navoaka androany Alemanina RTL ary Magazine Stern, FIT REISEN, mpandraharaha mpizahatany alemanina ao Hamburg dia mikasa ny hanao vakansy fahasalamana lafo vidy miaraka amina fanampim-panavotana aina lehibe: Ny vaksinin'ny Coronavirus.
Araka ny filazan'ny FIT REISEN, ny fonosana fanombohana dia hamidy amin'ny EURO 2000- 3000 miampy ny vidin'ny saram-pitsaboana sy ny vidin'ny vaksininy.
FIT Reisen dia namoaka izao fanambarana manaraka izao:
“Betsaka ny fangatahana azonay avy amin'ny mpanjifanay momba ny dia fialantsasatra ara-pitsaboana izay mety ho tonga miaraka amin'ny vaksinin'ny COVID-19 Mikaroka tsara an'io safidy io izahay. Mifandray amin'ny toerana samihafa izahay.
Manaiky fisoratana anarana tsy misy famehezana izahay ao amin'ny tranonkalantsika www.fitreisen.de/impfreisen Na izany aza, tsy manana programa manokana hivarotana isika amin'izao fotoana izao. ”
Manazava ao amin'ny tranonkalany ny Tour Operator.
Inona no atao hoe fitsangatsanganana?
Ny fitsangatsanganana vaksiny dia fialan-tsasatra ara-pahasalamana 3 ka hatramin'ny 4 herinandro izay ahafahan'ny mpandeha mandeha manomana fitsidihana dokotera roa ary mahazo ny vaksinin'ny Coronavirus. Mampanantena ny hotely fitsangatsanganana sy fialan-tsasatra ny mpandraharaha mpizahatany izay halam-bahiny sy harotan'ny yoga, Ayurveda ary ny otra ny vahiny.
Nanampy i FIT Reisen: “Tsy hanaisotra ny vaksininy amin'ny mponina eo an-toerana izahay. Tsy hanolotra afa-tsy ny fonosanay izahay raha vantany vao vita vaksiny ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny firenena halehantsika. ”
Ilay manam-pahaizana alemà Karl Lauterbach dia mahita fa tsy etika ny fomba fiasa toy izany.
Israel dia manana fanambarana manjavozavo milaza fa tsy manolotra izany fotoana izany amin'izao fotoana izao. Nikatona hatrany i Israel ho an'ny fizahan-tany, saingy manantena izahay fa ny Israeliana rehetra dia afaka vaksiny tsy ho ela.
Sherin Francis, CEO an'ny Seychelles Tourism Board dia gaga nandre izany fivoarana izany avy eTurboNews ary tsy nahafantatra ny fitsangatsanganana vaksinina kasaina hatao any amin'ny firenena nosy. Nampanantena izy fa hanadihady sy hitandrina eTurboNews nampahafantatra momba ny fanovana rehetra.
Mpikambana ao amin'ny birao Tambajotra fizahan-tany manerantany tsy te ho voatonona anarana nefa nilaza hoe: Azo inoana fa fotoana fohy fotsiny io. Resaka vola.
Fa manintona ny toerana haleha hamenoana trano fandraisam-bahiny ho an'ny tahan'ny talantalana. Raha manaiky ny hanohana sy hanao ara-dalàna ny hetsika toy izany ny indostria sy ny mpitondra fanjakana, ary aorian'ny fanaovana vaksiny ny mponina eo an-toerana, dia mety ho lasa fotoana sy fitahiana ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any amin'ny firenena sasany izany.
Qatar Airways miarahaba ny FC Bayern München tamin'ny fandresen'ny FIFA Club World Cup Qatar 2020
Mampanantena i Rwanda: Tontolo iainana azo antoka amin'ny Fivoriana an-tampon'ny CHOGM